Akụkọ - 2020, ọnụahịa ahịa nchara nke China ga-ebu ụzọ daa wee bilie, na-enwe nnukwu mgbanwe na ịrị elu
Ka ọ na-erule afọ 2020, ọnụ ahịa ahịa nchara nke China ga-ebu ụzọ daa wee bilie, na-enwe nnukwu mgbanwe na ịrị elu. Site na November 10, 2020, mba ígwè price mejupụtara index ga-155.5 isi, na-abawanye nke 7.08% karịrị otu oge n'afọ gara aga. Ebe etiti ike ndọda ebilila.
Consumer ina ga-abụ ihe siri ike. Ebe ọ bụ na mmalite nke afọ a, mba macroeconomy ka natara nwayọọ nwayọọ, na aku n'uba ọnụego gosiri a V-ekara nloghachi, na anụ ego aghọwo-elekwasị anya nke counter-cyclical ukpụhọde. A na-eme atụmatụ na ọchịchọ maka nchara anụcha (gụnyere mbupụ nchara nchara) ga-awụlị elu ruo ijeri tọn 1, na-achọpụta ọhụụ ọhụrụ na akụkọ ntolite.
Ọnụahịa nke gbazee ihe ọkụkụ arịbara elu. Kemgbe mmalite nke afọ a, n'ihi ihe dị iche iche, ọnụ ahịa nke ihe eji eme ka nchara nchara dị ka iron iron na coke arịgoro nke ukwuu na mba ahụ, na-eme ka ọnụ ahịa nke nchara wee mepụta nkwado nkwado siri ike.
The depreciation nke US dollar ọnụego mgbanwe. Na 2020, ọnụahịa mba nchara na-agbanwe, na ndakpọ nke dollar US bụkwa ihe dị mkpa. Ọnwụ nke dollar US ga-eme ka ọnụ ahịa mbubata nke gbazere agbaze ngwaahịa na ngwaahịa nchara, ma mee ka ọnụ ahịa ụlọ ụlọ bawanye.
Na 2020, ọnụahịa nchara nke China ga-agbanwe ma bilie, nke mbụ, ọchịchọ ndị ahịa ga-adịwanye ike. Ebe ọ bụ na afọ a, mba nnukwu-aku natara nwayọọ nwayọọ, na aku n'uba ọnụego agbanwewo n'ime a V-ekara nloghachi, na anụ ego aghọwo-elekwasị anya nke counter cyclical ukpụhọde. N'ihi nke a, ike nchara nchara China ga-abawanye karịa ibelata na 2020. Karịsịa mgbe ha banyere ọkara nke abụọ nke afọ, ọchịchọ nchara mba ga-esikwu ike Dabere na ọnụ ọgụgụ, site na Jenụwarị ruo Septemba afọ a, ihe doro anya nke China nke mmanụ. ígwè bụ 754.94 nde tọn, mmụba kwa afọ nke 7.2%. Otu n'ime ha, uto uto na July bụ 16.8%, na Ọgọst bụ 13.4%, na na Septemba bụ 15.8%, na-egosi nnukwu ike nchara nchara chọrọ (gụnyere mbupụ nchara nchara) ga-awụba ijeri 1 ijeri, ọhụụ ọhụrụ na akụkọ ihe mere eme